Ukuphuculwa kweSameSite kaGoogle kuQinisekisa ukuba kutheni abapapashi kufuneka bagqithe ngaphaya kweeKuki zokuJolisa kubaphulaphuli | Martech Zone
Ukuphuculwa kweSameSite kaGoogle kuQinisekisa ukuba kutheni abapapashi kufuneka baHambe ngaphaya kweeKuki zokuJolisa kubaphulaphuli
NgoMvulo, Februwari 17, 2020 NgoMvulo, Februwari 17, 2020 UJeff Kupietzky
Ukuqaliswa Ukuphuculwa kweSameSite kuGoogle kwiChannel 80 NgoLwesibini, Feb. 4 isayinela enye isikhonkwane ebhokisini kwii-cookies zomntu wesithathu. Ukulandela kwizithende zeFirefox kunye neSafari, esele zivimbile ii-cookies zomntu wesithathu ngokungagqibekanga, kunye nesilumkiso secookie esele sikhona seChannel, ukuphuculwa kweSameSite kuyaqhubeka nokubambelela ekusebenziseni ii-cookies zomntu wesithathu ekujolise kuzo kubaphulaphuli.
Utshintsho ngokuqinisekileyo luya kuba nefuthe kubathengisi bezobuchwephesha beentengiso abaxhomekeke kakhulu kwiicookies zomntu wesithathu, kodwa abapapashi abangazilungelelanisi iisetingi zesiza sabo ukuthobela iimpawu ezintsha baya kuchaphazeleka. Ayizukuthintela kuphela ukwenza imali ngenkqubo yeqela lesithathu, kodwa ukusilela ekuthobeleni kuya kuthi kumise imizamo yokulandela indlela yokuziphatha komntu ebaluleke kakhulu ekusebenziseni umxholo ofanelekileyo, owenzelwe wena.
Oku kuyinyani ngokukodwa kubapapashi abaneendawo ezininzi-inkampani enye ayilingani kwindawo enye. Oko kuthetha ukuba, ngohlaziyo olutsha, ii-cookies ezisetyenziswa kwiipropathi ezininzi (indawo enqamlezileyo) ziya kuthathelwa ingqalelo njengomntu wesithathu, kwaye ke ngoko zivaliwe ngaphandle kwezicwangciso ezifanelekileyo.
Guqula ukuKhanya kweDrives
Ngelixa abapapashi kuyakufuneka baqiniseke ukuba iisayithi zabo zihlaziywa ngeempawu ezifanelekileyo, olu tshintsho lulula lukaGoogle kufuneka lenze abapapashi bacinge kabini malunga nokuxhomekeka kwabo kujolise kubasebenzisi becookie. Ngoba? Ngenxa yezizathu ezibini:
Abathengi baya bexhalaba ngakumbi malunga nendlela iinkampani eziyisebenzisa ngayo idatha yazo.
Kukho indlela echanekileyo ngakumbi yokwakha igrafu yesazisi.
Xa kufikwa kumba wobumfihlo bedatha, abapapashi bajongana nekrele elintlangothi-mbini. Idatha entsha ibonisa ukuba abathengi bafuna kakhulu umxholo wobuqu iingcebiso ezinokuhanjiswa kuphela ngokuqokelela kunye nokuhlalutya idatha yokuziphatha kwabo. Nangona kunjalo, abathengi bayathandabuza kakhulu malunga nokwabelana ngedatha. Kodwa, njengoko abapapashi besazi, abanakuba nazo zombini iindlela. free Umxholo uza ngendleko, kwaye mfutshane kwi-paywall, ekuphela kwendlela yokuba abathengi bahlawule ngedatha yabo.
Bazimisele ukwenza njalo - I-82% ikhetha ukubona umxholo oxhaswe yintengiso kunokuhlawula umrhumo. Oko kuthetha ukuba uxanduva kubapapashi ukuba balumke ngakumbi kwaye babe nolwazelelelo ngendlela abayiphatha ngayo idatha yomsebenzisi.
Enye indlela engcono: i-imeyile
Kodwa, kuyacaca, kukho indlela esebenzayo ngakumbi, ethembekileyo nechanekileyo yokwakha igrafu yesazisi somsebenzisi kunokuthembela kwiicookies: idilesi ye-imeyile. Endaweni yokulahla ikuki, enika abasebenzisi umbono wokuba bayakhangelwa, ukulandelela abasebenzisi ababhalisiweyo ngedilesi ye-imeyile, kunye nokudibanisa idilesi kwindawo ethile, eyaziwayo yindlela ethembekileyo ethembekileyo yokuzibandakanya kwabaphulaphuli. Nasi isizathu:
Imeyile kukungena -Abasebenzisi batyikitye ukufumana incwadana yeendaba okanye olunye unxibelelwano, benika imvume yabo yokuba unxibelelane ngqo nabo. Banolawulo kwaye banokukhetha ukuphuma nanini na.
I-imeyile ichanekile ngakumbi -Iicookies zinokukunika umbono ombi womsebenzisi ngokusekwe kukuziphatha- iminyaka eqikelelweyo, indawo, ukukhangela kunye nokuziphatha kokucofa. Kwaye, banokudakwa ngokulula ukuba ngaphezulu komntu omnye osebenzisa isikhangeli. Umzekelo, ukuba usapho luphela lwabelana ngeLaptop, umama, utata kunye nokuziphatha kwabantwana konke kuxakanisekile kwenye, eyintlekele ejolise kuyo. Kodwa, idilesi ye-imeyile ibotshelelwe ngqo kumntu othile, kwaye isebenza kwizixhobo zonke. Ukuba usebenzisa izixhobo ezingaphezulu kwesinye, okanye ufumane isixhobo esitsha, i-imeyile isasebenza njengesazisi esingapheliyo. Ukunyamezela kunye nokukwazi ukudibanisa indlela yokuziphatha kunye nokukhangela kwiprofayili yomsebenzisi eyaziwayo ivumela abapapashi ukuba bakhe umfanekiso ocacileyo, ochanekileyo ngakumbi wokukhetha komsebenzisi kunye nomdla.
I-imeyile ithembekile -Ukuba umsebenzisi ubhalisa ngedilesi ye-imeyile, bayazi ngokupheleleyo ukuba baya kongezwa kuluhlu lwakho. Kugqithisile-bakunike imvume besazi, ngokungafaniyo neicookie eziziva ngathi utsiba kukuziphatha kwabo emagxeni abo. Kwaye, uphononongo lubonisa ukuba abasebenzisi bayi-2/3 amathuba okuba bacofe umxholo-nkqu neentengiso- ezivela kumshicileli abamthembayo. Ukuhamba ujolise ekujolise kuyo nge-imeyile kunokunceda abapapashi bagcine ukuthembana, okuxabiseke kakhulu kwiindaba zobuxoki zanamhlanje, imeko ethandabuzekayo.
I-imeyile ivula ucango lwezinye iziteshi eziya kwenye -Ukuba usungule ubudlelwane obuluqilima ngokwazi umsebenzisi kwaye ubonakalise ukuba uya kuhambisa umxholo ofanelekileyo kwaye owenziwe ngokobuqu kwimidla yabo, kulula ukubabandakanya ngaphezulu kwejelo elitsha, njengezaziso zokutyhala. Nje ukuba abasebenzisi bathembele kumxholo wakho, isimbo kunye neengcebiso, bakulungele ngakumbi ukwandisa ubudlelwane babo nawe, ukubonelela ngamathuba amatsha okuzibandakanya kunye nokwenza imali.
Ngelixa ukuhlaziya iisayithi ukuthobela utshintsho lweSameSite kunokuba yintlungu ngoku, kwaye kunqumle ngokuthe ngqo kwingeniso yabapapashi, inyani iyanciphisa ukuthembela kwikuki yomntu wesithathu yinto elungileyo. Ayisiyiyo kuphela yokuba bengaxabisekanga xa kufikwa ekulandeleleni ukhetho lomntu ngamnye, kodwa abathengi bayanda ngokuthandabuza.
Ukutshintshela ngoku kwindlela ethembekileyo, ethembekileyo enjenge-imeyile yokuchonga kunye nokujolisa kubasebenzisi inika isisombululo esilungele ixesha elizayo esibeka abapapashi kulawulo lwabaphulaphuli babo ubudlelwane kunye nokugcwala, kunokuba baxhomekeke kakhulu kumaqela esithathu.
tags: chromiumUbhaliso lwe-imeyileGoogle chromeisamesiteyokulandelela
UJeff usebenza njenge-CEO ye Jeeng, inkampani yeteknoloji entsha inceda iinkampani ukuba zenze imali ngeencwadana zabo ze-imeyile ngomxholo oguqukayo. Isithethi esihlala rhoqo kwiinkomfa zeDijithali zeMedia, uye wabonakala kwi-CNN, CNBC, nakwiimagazini ezininzi zeendaba kunye nezoshishino. UJeff wafumana iMBA emagqabini kakhulu kwiSikolo soShishino saseHarvard kwaye waphumelela uSumma Cum Laude ngeBA kwi-Economics kwiYunivesithi yaseColumbia.
Umqhubi: Iplatifomu yokuThengisa yeOrganic yestokhwe seShishini sakho seMarTech